Kushungurudza - Dambudziko mubhokisi - reflux chirwere
Kutsemuka Kwemhepo Reflux Disease | Kudzivirira utano
Nemhaka yei musikana usati wapera zvakare?
Ndezvipi zviratidzo zvinowanzoitika?
Ndinofanira kuenda rini kune chiremba?
Ndeipi iyo ngozi yekenza?
Vakawanda vakaona mufananidzo usati wavapo: munhu uyo ​​anoita seanopfira moto, uye pedo neyo musoro unoti "Heartburn". Izvi ndezvechokwadi mufananidzo wakakombama, nokuti kuora mwoyo, pasinei nezita rayo, hakuchina chokuita nemoto kana moto. Pane kudaro, pane kushungurudzika kwemukati mutsvuku mukati mechiri shure kwayo - kunzwa kusina kufadza.
Kushungurudza - Dambudziko mubhokisi (reflux chirwere)
Anenge munhu wese anoona izvi panguva nenguva. Chero bedzi zviratidzo zvinonyangarika pachavo maawa mashure maawa kana kwemazuva akawanda kana maviri, hakuna chinhu chingafunganya nezvazvo. Panenge ne10 kusvika ku15 muzana yevaya vanobviswa vanodzima kupisa mumutsipa, zvakadaro.
Kushungurudza - chirwere chemafuta
Mavari, mucosa yakasimba zvakatsamwa zvokuti inopisa. Izvo zvinonzi chirwere che reflux, chinoguma kubva pairi, chinofanira kubatwa pane imwe neimwe. Kunyange zvazvo kuora mwoyo kunononoka nguva dzose kusingabatsiri: mune zvikamu zvepamusoro zvechirwere, pasina chirongwa chakakodzera, zvinetso zvehutano zvakakomba - kusanganisira kenza - inopisa.
Mhinduro dzinotevera kumibvunzo inonyanya kukosha pamusoro pekubvongodza kunobatsira kudzivisa chakaipisisa.
Kutambura kunomuka sei?
Midzi yehuipi ndiyo jisi yakagadzirwa. Inoshanda kusati inodya zvokudya uye "kuidya" nekuparadzanisa mazai vatsvene. Anopedza basa iri nekubatsirwa nema enzyme (pepsin) uye-iyo inonzwika isingazivikanwi pakutanga - chikamu che hydrochloric acid.
Hydrochloric acid mumuviri wedu? Hazvisi ngozi here? Kwete chero bedzi iyo gastric juice inoramba iine iyo-mudumbu. Pasinei pH yakawanda yeHN ye1 kusvika ku3 - iyo inowanikwa zana pane yakawanda kupfuura vhiniga - chirwere chekudya chinenge chisina kukuvara ipapo. Pamusana pegadziriro yavo yakakosha, masvingo emukati emudumbu anogona nyore nyore kushivirira iyi inoparadza nzvimbo.
Kazhinji, sphincter inochengetedza shanduko pakati penheyo uye mudumbu zvakasimba kuitira kuti hapana asiriya inopukunyuka kuburikidza nekumusoro kwekuvhara mudumbu. Asi basa remuviri uyu rinogona kuvhiringidzwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana (ona mubvunzo unotevera). Somugumisiro, mukati momuviri mukati unopinda mukati mechipupuri uye unotsamwisa mucosa. Izvi zvinoratidzika sekutambudzika kwemoyo.
Iyo sphincter, iyo inonziwo "sphincter", inoisa chisungo chemuviri, inogona kukanganisa nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Kutanga, hazvisi zvisingashamisi kukwegura, izvo zvinokonzera kuchema kwekutanga kubva pa 50. Zera rinowanzoitika kakawanda. Izvi zvinowanzoitika usiku, nokuti sphincter iri pakati peeophagus uye mudumbu inorara zvakanyanya munguva yehope. Mukuwedzera, kubvumira kwezvokudya zvepamukati kunofarirwa apo pavete pasi.
Mune zvimwe zviitiko, kuputika kwechirwere kunokonzera kusununguka kwemudumbu mudumbu. Iyo inophagus inorasikirwa nemakumbo ayo, uye sphincter haisisiri kushanda zvakanaka. Mukudengenyeka kukuru kwemafupa, zviri mukati kubva mudumbu dzimwe nguva zvinopinda mukati me pharynx.
Chiratidzo chekare chekushushikana kwepfungwa chirwere chinorwadza uye chinopisa mudumbu rekumusoro. Dzimwe marwadzo dzimwe nguva dzinopera shure shure kwezamu. Kudzora kana kunwa hazvivandudzi manzwiro. Asi kunzwa uku hakufaniri kufanira. Mune zvimwe zviitiko, kuratidzira kwegastric acid mumutsipa pakutanga pakutanga hakubvumi zviratidzo zvachose - izvi zvinonyanya kunyengedza. Kana zviratidzo zvikaonekwa gare gare, chirwere chacho chinogona kunge chiri mune imwe nzvimbo yakakwirira, izvo zvinoita kuti chirwere chiome.
Ndezvipi zviratidzo zvepamuviri?
Gastric acid mune sopu dzimwe nguva inokonzera zviratidzo zvisingatauri murwere kana chiremba anobatana nekuora mwoyo. Kunyanya vechidiki vanhu vanowanzonyunyutira kurwadza kwechifuva. Kana vanachiremba vakabva vatonga kurwisa kwepfungwa, dambudziko rinowanzotanga kuora mwoyo.
Iyo asiri mumutsipa inogonawo kutungamirira kukurwara kusingagumi kana kushaya chimiro, izvo vanachiremba vanowanzotanga kushandura sechinhu chinokonzera zviratidzo zvinotonhora kana zvechirwere. Dzimwe nguva vanorwara vanorondedzera kutorwa kwemumwe mutorwa mumarara.
Kushanda nekupisa nguva nenguva mumutsipa haisi chikonzero chekufunganya. Nezvisununguko zvisingaiti hapana anofanira kuenda kuna chiremba. Pamwe paiva nekofi yakawandisa, kana ine nzara, yakakora-yepamusoro-mafuta ndiyo yaiva mhaka. Muzvokudya zvakadaro, mudumbu inobereka akawanda asidi. Izvo zvisingafadzi kunzwa mumutsipa kazhinji zvinowira pachako. Zvisinei, kana zviratidzo zvikaitika kakawanda - kazhinji pavhiki - vanorwara vanofanira kubvunza chiremba. Mumwe munhu anenge aora mwoyo kakawanda pazuva kwevhiki mbiri kusvika kutatu achakurudzira kufungisisa kutarisa mamiriro ezvinhu.
Chirwere chinoratidzika sei?
Pakutanga, pane kuongorora kwemaitiro. Chiremera chemuviri chakarurama here? Ndiri kutama zvakakwana here? Kunyanya kuderedza uye kusvibisa kunogona kukurudzira kuora mwoyo. Uyewo chenjerera kana uchinwa waini yakachena, masipi nemafuta. Kana pasina kusava nechokwadi zviri nani kuita pasina. Izvo zvinoenderana nekofi, black tea uye carbonated drinks. Kusvuta kunokuvadza nekuti nicotine inoderedza salivation iyo inotapira musimba acid. Kunyange zvazvo kugadzirisa tsika kunogona kubatsira, hazviwanzogone. Nezviitiko zvakadaro, pane ikozvino maverengeka emishonga yakashanda-inoshanda.
Nezvirwere zvinyoro, mishonga yeAid-binding inowanikwa (inoshandiswa zvinoshandiswa: hydrotalcite, Algeldrat, magaldrate, sodium aluminium carbonate) uye calcium uye magnesium carbonate. Kugadzirira rine ranitidine kana famotidine inodzivisa kugadzirwa kwegastric acid. Kana chirwere chemudumbu chisimba ndicho chinokonzera, mishonga yemishonga ine zvinyorwa zve peppermint, caraway, gentian uye machero machirwe machena. Muzviitiko zvakakomba vanachiremba vanopa mishonga kubva mukirasi reproton pump inhibitors. Vanodzivisa kuumbwa kweAsiri zvakanyanya kubudirira, asi usashanda pakarepo.
Zvimwe zvinokonzera mutsara we sphincter kuti uzorore pamusuo wekumucheto, zvichiita kuti reflux yegastric contents inopopus. Izvi zvinosanganisira chirwere chakakosha, mwoyo uye ropa zvinodhaka mishonga. Uyezve, dzimwe calcium channel blockers uye zvinodhaka zvinokonzera zvinogona kuipa. Zvisinei, varwere havafaniri kuita kunze kwemishonga yavo - iyo ingadai iri kutyisidzira upenyu. Vanhu vanotambura nekupuka kwemoto vanofanira kutanga vataurira chiremba wavo.
Kuvhiya kunobatsira here?
Kana munhu akaora mwoyo achida kutora mishonga chero ipi zvayo, kana asingabvumiri kana kuti asina chaanoita kwavari, vanachiremba vanogona kubatsira kakawanda nekuvhiya. Kuita kwakadaro kunonzi "fundoplication". Vanachiremba vanobva mumatumbu pamusuo wekumusoro vanoumba chitubu, chavanenge vakaviga pachinzvimbo chekushanduka kubva pachienda kusvika mudumbu. Izvo zvinokonzera kukonzera zvinokonzera kuti leaky sphincter ishande zvakanaka zvakare. Vakawanda varwere vanorarama vasina kuoma mushure mokushanda. Mukuwedzera kune zvinetso zvinowanzoitika zvinogona kutevera chero upi zvake (chirwere, utachiona husina kuporeswa), nzira yacho yakachengeteka (kana yakaitwa nechiremba ane ruzivo).
Munenge 10 muzana yevanhu vane chirwere che reflux, kune mucosal inoshandiswa mumusango. Ava ndivo vanokonzera kenza, vanachiremba vachitaura nezve "Barrett's syndrome". Vazhinji vevarwere vanobatwa, avo vane chirwere chekutsvaga chave chaita munguva shoma kana kuti chisati chaonekwa. Kunyange panguva iyi, vanachiremba vanogona kurapa zvakanaka - kunze kwekuti murwere anotaura panguva nenguva nemakungani ake.
Izvi hazvisi nguva dzose, saka pane dzimwe nguva kenza yechokwadi inotanga kubva pakunanga. Kazhinji kupararira kwakadaro pakutanga kunogara munzvimbo yakakwana. Apo yakawanikwa kare, vanachiremba vanovhiya vanowanzogona kubvisa masero emukenza achishandisa endoscopic nzira. Zvakakosha kunyatsocherechedza mamiriro ehutano hwevamwe varwere mushure mokupindira. Kana akabudirira, zvinetso zvakaoma hazviwanzoitiki.
Mishonga yeKavhinethi & Mishonga Cabinet Kudzivirira utano
Weather sensitivity | Kudzivirira utano
Mishonga yemhuri yevana | Kudzivirira utano
Insect bites | Kudzivirira utano
Boreout | Kudzivirira utano
Mishonga yemusha | Kudzivirira utano
Kushayiwa kwesimbi | Kudzivirira utano
Feng Shui | Kuchengetedza kwoutano
Middle Ear Ear Inflammation | Mishonga yehutano